Indlu epholileyo kumgangatho we-2 ilungele ukuhlala ixesha elide kunye nosapho. Ukungena kwabucala kunye nokufikelela ngokulula, kunye neendawo zokupaka iimoto. Inegumbi lokulala elikhulu elinesimo somoya, igumbi lokuhlambela labucala, ikhitshi kunye negumbi lokutyela elinendawo yokusebenza. Unokufumana zonke izinto ezithuthuzelayo apha kwaye siqinisekisa ukuhlala okumnandi kunye nokuzola.
Indawo yokulala ebanzi egcwele intuthuzelo kunye nencasa entle, eyilelwe ngokukodwa ukuphumla kunye nolonwabo lomxumi. Ilungele usapho kunye nendawo yokuhlala ixesha elide, kunye nazo zonke iinkonzo ezisisiseko zendlu. Mganyana kude nesiphithiphithi sesixeko, inika indawo yokuhlala ezolileyo enobumfihlo obubalaseleyo. Yahlula indawo yokungena kunye neyokupaka yabucala yemoto yakho.
Indawo ezolileyo neyonwabileyo, kude nesiphithiphithi sombindi wedolophu, nto leyo eya kuvumela undwendwe ukuba luphumle ngoxolo kunye nobumfihlo obupheleleyo.
Ndiyathanda ukwenza iindwendwe zizive zisekhaya, ukuba zingomnye wosapho lwam kwaye ukuba ziyathanda, zinokuthatha inxaxheba kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla. Ungandithatha njengomhlobo.